Torohevitra hahazoana mihinana kely | Sakafo Nutri
Fausto Ramirez | | Torohevitra hampihenana lanja, Vatsim-pivelomana
Raha te hijanona ianao mihinana ary alao fifehezana ny anao fahazarana sakafo, manolotra soso-kevitra azo ampiharina izahay hanatratrarana azy. Ny tsirairay dia tokony hanapa-kevitra sy hanao zavatra tiany hohanina ary hampitsahatra ny fahazaran-dratsy. Rehefa lasa a asa sarotraTokony haverina fa fampiasam-bola mandritra ny androm-piainana io ary misy vokany maharitra.
Raha manana fahazarana ianao mihinana be loatraMety ho sarotra indraindray ny manaraka ny fahazarana misakafo. Ny fomba tsara dia tsy voatery mividy sakafo tsy mahasalama. Raha ny mahazatra, raha ao an-trano izy ireo dia hisy fakam-panahy hihinana azy ireo foana.
Tsy mety ihany koa ny maka fotoana lava hihinanana eo anelanelan'ny sakafo. Rehefa miandry ela loatra ianao dia manandrana manonitra ny fotoana nandritry ny tsy nampidirina na inona na inona, ary miafara amin'ny farany mihinana be loatra. Ny tsara indrindra dia ny mihinana sakafo antonony 5, misimisy ihany mandritra ny andro fa tsy 3.
Tsy azo atao koa ny miantsena noana. Amin'ny mahazatra, rehefa mankany amin'ny fivarotana lehibe ianao dia mazàna mividy mihoatra ny ilainao. Vantany vao novidina ny sakafo rehetra, ary ao an-trano ianao, dia tsy maintsy manary ny sakafo ianao.
Miezaha hihinana sakafo mamela anao hifehy ampahany. Ohatra, aza mividy boatina serealy boaty, manandrama mividy ny fonosana misy boaty kely 10. Amin'izany fomba izany dia fantatrao tsara izay hohaninao ary tsy misy tafahoatra.
Afaka miresaka amin'ny namanao ianao ary manazava izay tadiavinao mihinana latsaka. Amin'izany fomba izany dia tsy maintsy manome kaonty ianao ary izany dia hanampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara mifandraika amin'ny sakafo.
Raha misakafo any ivelany ianao dia tokony manafatra zavatra maivana, na ny antsasaky ny lovia no hohaninao raha feno azy. Ny ambiny dia azo entina mody ary hohanina rehefa avy noana. Amin'izany no ahafahanao mihinana izay tadiavinao fa tsy sanatria mihinana be loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Torohevitra hampihenana lanja » Torohevitra mba hihinanana kely kokoa